Wednesday December 02, 2020 - 16:31:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
bishii lasoo dhaafay maxkamadda sare ee Australia ayaa xaqiijisay in tobanaan kamid ah ciidamada melleteriga wadankaas ay dad shacab ah ku xasuuqeen mid kamida gobollada afghanistan.
Saxiifadda Guardian ayaa soo warisay in askarta Australia ay khamri ku cabiyeen lugaha ama addiinka Mujaahidiin katirsanaa Taalibaan oo lagu dilay dagaal ka dhacay Afghanistan iyo iyagoo suurad xumeynaya jasadka shuhadada.
Wargeysku wuxuu ku sheegay warbixintiisa in dhacdadan aan kor ku soo xusnay ay dhacday sanadkii 2009-kii intii lagu guda jiray howlgal saliibi ah oo isbahaysiga uu hogaaminayo Mareykanka ay ka fuliyeen gobolka Uruzkan ee Afghanistan.
Ciidamada Australia oo qeyb ka ahaa dagaalka culus Ee lala galay imaarada Islaamiga ah ayaa ku kacay fal bahalnimo ah oo khilaafsan xeerarka ka degsan dagaalka waxayna aad u tashwiihiyeen jasadka daahirka ah ee mujaahidiinta iyagoona ku dul qoob ka cayaarayay.
Wargeyska The Gurdian wuxuu daabacay sawirrada askarta Ustaraaliya oo khamri ku dul cabaya lugo la rumeysanyahay in lagasoo jaray shuhadada mujaahidiinta ee ku baxay dagaalkii dhacay sanaddii 2009-ka.
sawir kale oo kamid ahaa sawirradii argagaxa lahaa ee lasoo qaaday ayaa muujinayay labo sarkaal Australian ah oo lugta jasad mujaahid ah sawir isaga qaadaya islamarkaana aad ugu faraxsan waxa xun ee ay sameynayeen.
inkastoo warbaahinta gaalada ay ku andacoonayaan in askarta xilligii falkan sameynayeen ay sarkhaansanaayeen ayaa loo badinayaa in arrinkaas ay ku daboolayaan xumaanta ay sameynayeen.
Soo bandhigida fadeexadan ayaa timid kadib markii la daabacay warbixin uu diyaariyay isku duwaha guud ee Ciidamada Difaaca Australia taas oo lagu sheegay in saraakiisha ciidamada gaarka ah ee Australia ay askarta ku qasbeen in ay dilaan tiro maxaabiis Afqaanistaaniyiin ah si saraakiishu ay ugu raaxaystaan aragtida qulqulka dhiigga muslimiinta.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in ay jiraan 39 dil bahalnimo ah oo lagula kacay dad ay qabteen ciidamada gaarka ah ee Australia, askarta xasuuqan ugeystay muslimiinta afghanistan waxay katirsanyihiin guutada gaarka ah ee ciidanka cirka Australia.
Fadeexaddan oo gilgishay siyaasadda wadanka Australia ayaa la sheegay in ay sababi karto in maxkamad lasoo taago mas'uuliyiintii xilligaas maamulayay wadanka iyo saraakiisha ciidamada wadankaasi.
Dowladda Saliibiyadda Australia ayaa duullaanka Afghanistan uga qeyb qaadatay 26,000 oo askari intii u dhaxeysay sanadihii 2005 iyo 2016, ciidamadaas waxaa kamid ahaa in kabadan 3,000 oo ah askar qaabilsan howlgallada gaarka ah islamarkaana ciidamada American-ka kala qeyb qaadan jiray weerarada habeen dheelmadka ah.
Jimcihii la soo dhaafay, Abaanduulaha Ciidanka Australia wuxuu shaaca ka qaaday in 13 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah lagu wargaliyay in ay wajahayaan in shaqada laga eryo,kadib markii lasoo saaray warbixin caddaynaysa in ay geysteen dilal ka dhanka ah shacabka rayidka ah.
Madaxda hay'adda Human Rights Watch ee qaaradda Asia ayaa warbixintan soo baxday ku tilmaamtay mid aad uyar marka loo eego dambiyadii dagaal ee Afghanistan ka dhacay waxayna xukuumadda dabadhilifka Kaabuul ku dhaliishay in aysan waxba ka qaban arrintan ayna hoosaadinayso dambiyadii ay geysteen ciidamada shisheeye.
Patricia Gossman waxay carabaawday in dowladaha ku bahoobay howlgalka NATO ee afghanistan ka dagaallamay ay iska indha tireen warbixinno ay horay usoo saareen oo ahaa in ay geysteen tacadiyo argagax leh.
Hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka ayaa dhaleeceeyay ciqaabta khafiifka ah ee lamarsiiyay askarta Australia ee xasuuqa ka geystay Afghanistan kuwaas oo ciqaab looga dhigay oo kaliya in shaqada laga eryayo.
Afhayeen u hadlay xukuumadda dabadhilifka Afghanistan ayaa fadeexaddan ku habsatay melleteriga Australia ku sifeeyay dacaayad rakhiis ah uu quudinaya dagaalka Taliban oo uu ula jeedo in dhacdadan ay kusoo baraarugi karaan kumanaan muslimiin reer afghanistan ah kuwaas oo buuxin doona safka mujaahidiinta imaarada islaamiga ah